Minisitry ny Fitsarana: « Tsy handeferena ireo mpitsara manao kolikoly” | NewsMada
Mba tsy ho resabe ? Mbola nanamafy hatrany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana fa ho hentitra amin’ireo mpitsara, mihoa-pefy amin’ny fanatanterahana ny asany.
“Tsy handefitra manoloana ireo mpitsara zatra ny lalan-dririnina amin’ny fanaovana kolikoly ny minisitera. Ampirisihina ireo manana porofo mba
hitondra fitorohana sy fitoriana eny anivon’ny sampana misahana izany”, hoy ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny, ny alatsinainy teo tao Toamasina. Nohitsiny fa efa eo am-pelatanan’ny minisitera ny raharaha, anisan’ny maha be resaka ao an-toerana, momba ny ady tany ahenoana mpitsara ao anatin’izany.
Tsiahivina fa notanterahina tamin’io fotoana io, tao amin’ny oniversiten’ i Barikadimy ny fihaonana teo amin’ny minisitry ny Fitsarana sy ny departemantan’ny ” Faculté de Droit, des Sciences Economiques, de Gestion, et de Mathematique Informatique et Applications- DEGMIA”. Nivoitra tamin’izany ny fametrahana fiaraha-miasaamin’ny tokony hanampiana na koa hiarahana mikaroka mpampianatra hisahana ny sampam-piofanana eo anivon’ny “Masters II” ho an’ny fampiofanana lalàna. Eo koa ny momba ny fianarana asa ho an’ ireo mpianatra lalana.
Mpitsara hampita traikefa amin’ireo tanora
Hisy rahateo ny famoahana andiana mpianatra amin’izany sampam-piofanana lalana izany ka nangatahana ny mba ho “Ray mpiahy”, ny minisitra amin’ity andiany ity. “ Anisan’ny veliranon’ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny fampianarana ambony sy fananana tanora ho tsara taiza sy hanana fahaizana ho fitaratry ny firenena”, hoy ny minisitra. Nanteriny fa mety hisy fiantsoana ireo mpitsara efa misotro ronono, terem-panahy hampita ny traikefany ho an’ireo tanora eo anivon’ny oniversite. Tsiahivina fa miavaka amin’ny departemanta rehetra misy eo anivon’ny oniversiten’ i Barikadimy ny Degmia, tarihin’ny sojabeny, tanora amin’ ireo soja be rehetra. Mihazakazaka eo amin’ny fampiroboroboana ny fampianarana sy ny fampiofanana eo anivon’ny departemanta tantaniny. Eo koa ny ezaka ho fampandrosoana sy fampiakarana hatrany ny lentan’ny fampianarana eo anivon’ny anjerimanotolo.